Nala soo xiriir - Hebei Kingmetal Flange Oo suurawdo Manufacturing Co., Ltd.
Wax soo saarkayagu waa loo dhoofiyaa adduunka oo dhan. Macaamiishayadu had iyo jeer way ku qanacsan yihiin tayadeena la isku halleyn karo, adeegyada u jahaysan macaamiisha iyo qiimaha tartanka. Hadafkeenu waa "inaan sii wadno kasbashadaada daacadnimada adoo u huray dadaalkeenna hagaajinta joogtada ah ee wax soo saarkeenna iyo adeegyadeena si aan u hubinno ku qanacsanaanta isticmaaleyaashayada dhammaadka, macaamiisha, shaqaalaha, alaab-qeybiyeyaasha iyo bulshooyinka adduunka ee aan iska kaashanno".
xizhaotong park park, shijiazhuang city, hebei, shiinaha
MA U BAAHANTAHAY CAAWIMAAD?
Shaqaalaheennu waxay u hoggaansamayaan ruuxa "Hufnaanta Ku-saleysan iyo Is-dhexgalka", iyo mabaadi'da "Tayada heerka koowaad ee leh Adeeg Aad u Fiican". Marka loo eego baahida macmiil kasta, waxaan bixinnaa adeegyo habeysan & shaqsiyeed si looga caawiyo macaamiisha inay gaaraan himilooyinkooda si guul leh. Ku soo dhawow macaamiisha dal iyo dibadba inay soo wacaan oo ay wax weydiiyaan!
NOO SII WAC
Fadlan nala soo xiriir annaga oo noo soo diraya emayl ama na soo wac haddii aad wax su'aalo ah ka qabtid shirkadeena. ou sidoo kale waxaad ka heli kartaa macluumaadka cinwaankeena boggayaga oo aan u nimid shirkadeena si aan u helno sahaminta duurka ee badeecadeenna. Waxaan kalsooni ku qabnaa in aan wadaagno wax wada qabsi iyo in aan abuuro xiriir iskaashi oo xoog leh saaxiibbadeenna ku dhex jira suuqan. Waxaan raadineynaa weydiimahaaga.
LA HELI KARO 9 subaxnimo ilaa 6 galabnimo